Sajhasabal.com |रेडक्रसको विवादमा सर्वोच्चको फैसला, रेडक्रसले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा के छ ?
रेडक्रसको विवादमा सर्वोच्चको फैसला, रेडक्रसले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा के छ ?
भदौ २५, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले दायर गरेको रिटमा उनकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ । थापाले जेठ २० मा दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले थापाको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्चका आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजालाशले मंगलबार थापाको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
वर्तमान कार्यसमितिमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको थियो । उजुरी छानबिन भइरहेको जनाउँदै प्रशासनले साधारणसभा रोकेपछि थापा सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वयले अन्तिम फैसला सुनाएपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले नै रेडक्रसमा निरन्तरता पाउने भएको छ ।
रेडक्रसले जारी गरेको बिज्ञप्ति